DOORASHADA NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE BATUN BASASHA - BOW
Yuu jecel yahay in aad naftaada ku dhajisid basasha cagaaran oo qaali ah miiska cuntada. Gaar ahaan haddii aad adigu kor u qaadday. In this article waxaan ka wada hadli doonaa noocyada basasha-batun, ama halkii, on noocyada ugu wanaagsan. Baska-batun way ka duwan tahay guluubka caadiga ah ee height of caleemaha fistuq iyo la'aanta basasha. Basasha noocan oo kale ah waxaa lagu beeray si gaar ah loogu talagalay cagaarka. Intaa waxaa dheer, inta badan ee kala duwan ee batun yihiin aan qabin xaaladaha deegaanka iyo dhalin kartaa wax ka badan hal mar sanadkii. Iyo dhawr sano oo dheeraad ah si ay u koraan hal meel. Maxay yihiin noocyada ugu fiican ee dhirta this savory, waxaan ku tilmaami doonaa hoos.
Kala duwanaanshuhu wuxuu ku noolyahay magaciisa oo waa noocyo kala duwan oo hore ah ee batun basasha. Isaga oo ka soo baxaya barafka xilliga gu'ga, wuxuu bixiyaa fitamiin badan, oo aan ka duwaneyn kuwa kale. Basasha ma dhiman karo xitaa -10 digrii oo kora hal meel ilaa toddoba sano. Kala duwanaanta bisha Abriil waxay leedahay fitamiin badan, sida A, B, C, iyo waxyaabo kale oo raad raac ah. Caleemaha basasha waa cufnaanta, ka dibna goynta goor wakhti dheer ku hayso xasilloonidooda. Dhirta caleemaha waa inta badan in ka badan nus mitir sare. Muuqaal kale oo ka mid ah kala duwanaanta bisha April waa caabbinta noocyada kala duwan ee cayayaanka iyo cudurrada. Laga soo bilaabo safka hore ee beergooyska, in ka yar saddex bilood ka gudbay. Basasha waxay leeyihiin dhadhan macaan leh daasad wacan. Laga soo bilaabo hal baadiyaha waxaad ka qaadan kartaa ilaa afartan caleemood. Waxaa ka mid ah hubaal ah in ay leeyihiin jirid leh abuur. Waxay u baahan yihiin waqti si ay u gooyaan, haddii kale dhan casiir u tagi doono miraha iyo dhadhanka khasaarinta basasha. Nooc noocaas ah basasha on carrada dhexdhexaadka ah iyo daawashada haramaha Gagaash, sababtoo ah batun April ma dulqaadan xaafadaha iyaga oo leh.
Waa muhiim! Inkasta oo basasha ay hal meel u koraan muddo toddoba sano ah, waxaan ku talineynaa bedelida goobta degelka kadib afar sano. Muddadan ka dib, basasha ayaa soo saari kara qadar yar oo ah midabada midabka leh ee saameeya dhadhanka dhirta.
Sidoo kale fasalka hore, baronka ayaa sidoo kale bislaaday. Dhererka ah ee afkoda waxay gaari karaan 70 cm, Si kastaba ha ahaatee, koritaanka sida on waxaa la aasaasay dhowr aabood been ah. Laga soo bilaabo xilliga soo baxay ee caleemaha koowaad ee beergooyska, waxay qaadataa muddo ka badan bil gudaheed. Leaves u adkaysta, toosan leh dhejis gaar ah. Baro kala duwan ayaa si fudud u dulqaadan kara dhaxanta. Dalagga ugu muhiimsan wuxuu keenaa sannadka labaad ka dib marka la beerto. Iyadoo hal mitir oo laba jibbaaran oo basal-batun ah ayaa laga soo ururin karaa ilaa toban kiilogaraam oo bac ah. Basal ayaa dhadhamiya dhadhanka aad u jilicsan, oo leh sharaf fiican. Caleemaha kala duwan ee noocaan ah waxaa lagu talinayaa in ay isticmaalaan cusub.
Kala duwanaanshaha Bahia Verde waa mid aad u xiiso badan, maxaa yeelay waa isku dhexjir u dhexeeya batoon iyo basasha. Waxa uu leeyahay sarreeya ugu sarreeya ee saaxiibadiisa. Cirridku kama badna 30 cm dhererkoodu, waxay kudhowaad yihiin 2 cm dhexdhexaad ah, caleemuhuna aad ayay u badan yihiin, midab cagaaran oo cufan leh oo dufan leh. Kala duwan waxaa loogu talagalay inay ka soo baxdo gu'gii ugu horreysey ilaa dayrta goor dambe. Haddii dhulka la ilaaliyo, basasha ayaa kori kara xitaa xilliga jiilaalka. Jiritaanka xididdada ka mid ah Beelahaas waxay u adkeysanayaan cudurada kallana casaan iyo kalluunka xididada Donets. Dhadhanka Bahia Verde waa mid naxariis badan, oo leh shucaac fudud.
Waa muhiim! Kobcinta noocyo basasha leh laamood oo sarreeya, ha iloobin inay ku dhuftanto, haddii kale caleemaha dhinaca ayaa laga yaabaa inay bilaabaan inay hoos u dhigaan miisaankooda.
Mid ka mid ah noocyada dhexe ee bislaado ee loo yaqaan 'batun basal' - Sunrise. Qaybahaani ma kala duwan yihiin asxaabtooda iyagoo soo dhaweynaya qabow iyo deganaansho xitaa xitaa qiyaasta 45-degree. Faa'iido leh afkoda gaaban ku filan. Heerka dhererka dhifka ah ayaa marar dhererkeedu ka sarreeyaa 27 cm, iyada oo mid ka mid ah toogta, ilaa soddon qaybood oo faa'iido leh ayaa laga heli karaa. Qorraxdu kala duwanaantu si gaar ah ugama dhex muuqan karto dadka kale dhalid Laga soo bilaabo hal mitir oo laba jibbaaran waxay helayaan ilaa shan iyo toban kiiloogaraam oo ah alaabta la dhammeeyey.
Waxyaabaha kala duwan ee basal-batun Gribovsky ama, sida waxaa sidoo kale loo yaqaan by dadka Gribovsky 21, way kala duwan yihiin kuwa kale ee dhalidda sare. Warshadku waa jilicsan, laakiin dhererka baadiyaha kama badna 25 cm, asalkoodu waa ka fudud yahay kuwa qaraabada ah, waxana uu leeyahay jilicsan, dhadhan macaan leh oo leh dhadhan yar. Fallaadhayaasha Gribovsky soo muuqdaan goor dambe, laakiin marka qaansada gaadho ugu sareeya ee koritaanka, caleemaha waa mid xoog badan oo adkaysi u dabaysha. Laga soo bilaabo hal mitir oo laba jibbaaran si ay u ururiyaan ilaa 20 kg oo nafaqo leh afkoda.
Ma taqaanaa? Noocyo kala duwan oo ah batun basal ayaa ku jira sonkor badan. marka loo eego tufaax iyo isteroberi.
Emerald wuxuu ku darayaa liiska noocyada hore ee bislaaday ee basasha-batun. Beeladan waxaa loo adeegsadaa iyada oo la gooyey bambooyinka basasha iyo basasha caadiga ah. Asal ahaan, kala duwanaanshahan waxaa loo isticmaalaa si loo diyaariyo noocyo kala duwan oo saladh ah. Caleemooyinkeeda waxaa lagu rinjiyeeyaa cagaar mug leh oo leh dhar gaar ah. Goobta Emerald waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiin C. Basasha waxay ka baxaan dhadhanka jilicsan, mid aad u casiir leh, yar oo fiiqan. Kala duwanaanshahan sidoo kale waa jiilaalka-adag iyo difaac badan cudurada.
A dhowaan la soo dhaafay, bred mid-Biyaha kala duwan ee basalka batuna Ispolin. Waxay u dulqaadanaysaa dhaxan daran. Caleenta buulashan waa mid ballaaran oo joogto ah, sidaa darteed waxay siisay magaca noocaas ah. Caleemaha qani ku ah cagaarka cagaaran, daboolay ubaxa ubaxa. Deeqo quruxsan oo aad ku dhadhamin karto sharooto fudud. Waxaa la koray inta badan isticmaalka cusub.
Tani noocyo kala duwan oo basal-batun waa mid ka mid ah ugu horrayn. Ka dib markii caleemaha ugu horeysay u muuqday, ka dib bishii waa la gooyaa oo la cuni karaa. Qeybaha hoose ma aha mid la jaango'an, oo aan ka badnayn 40 cm Caleemaha waa cagaar iftiin ah, qallalan, oo leh dhoowna wax yar. Waxba ma ahan in noocyada kala duwan ee la siiyay magaca noocaas ah, cawska iyo runta ay aad u jilicsan yihiin ee dhadhan leh oo leh shucuur wacan leh. Looga kiciyay saladh iyo saliid cusub. Noocyada kala duwan ee basal-jirku waa jilicsanaanta noocyo badan oo jiilaal-adag leh oo leh heer sare oo ah carotene.
Ma taqaanaa? Basal-batun waxa ku jira laba jeer ascorbic acid ka badan nalalka kale.
Kala duwan ayaa hore u bislaaday, ma ciirsanin, dherer dhexdhexaad ah. Caleemaha waa toosan, joogto ah, dhalaalaya oo cagaar ah oo leh dufo dabacsan. Dareenka dhadhanka ah ee basasha oo fiican, casiir leh, oo leh raaxo iyo content sonkor oo sarreeya. Caleemaha looma adkeyn wakhti dheer in la gooyo oo awood u leh inay ilaaliyaan tayada nafaqada iyo muuqaalka. Sidoo kale, kala duwan tani waxay u adkaysaa barafoobay.
Jiilaalka Ruush - noocyo kala duwan oo koriinkara. Waxay ka duwan tahay noocyada kale ee qandhada dheer iyo ka badan. Qaybta hawada ee midab madow. Warshad beereed leh leh joogto ah afkoda. Caleemaha waxay leeyihiin dhadhan casiir leh oo leh muuqaal daciif ah oo fiiqan. In goynta muddo dheer ma koraan kaba, haynin dhammaan guryaha faa'iido leh. Kala duwan waa baraf u adkaysta oo waxaa la koray inta badan diyaarinta saladhka.
Ma taqaanaa? Onion-batun ayaa ka helay helitaankiisa xitaa daawooyinka. Iyadoo ay saldhig u tahay, waxay qaataan daawooyin hoos u dhigaya cadaadiska dhiigga.
Salad ama salad 35 - noocyo hore oo leh adkeysi sii kordhaya qabow. Maqalka ayaa kor udhaafa qiyaastii nus mitir ka sareeya dhulka. Caleemaha waa dudchatye xoog leh, leh branching xoog leh. Sida laga soo xigtay dabeecadaha dhadhanka kama duwana dadka kale. Si isku mid ah oo casiir leh, oo leh jajab qabow. Waxay u egtahay in ay ku jiifiso gooyo wakhti dheer oo aan aheyn mid qallafsan. Kala duwan oo kale waa mid u adkaysata cudurada kala duwan.
Kala sooc Sergei - waa miro ka mid ah isgoyska basal-barta iyo basasha. Waxuu soo kicinayaa waqti hore oo wuxuu kala fidiyaa kor u dhaafka nus mitir sare. Leaves u adkaysta, ku rinjiyey midab cagaaran oo leh xayndaab buluug ah oo xiiso leh oo leh cagaar wanaagsan oo la dareemo. Serezha waxay si fudud u dhali kartaa miraha daran. Caleemaha dhadhan aad u sarreysa, jilicsan, oo leh dareen xoog leh oo fiican iyo macaan macaan.
Waxaan ku soo bandhignay si aad u caan ah-Bisaylkiisa iyo noocyo hore-Bisaylkiisa ee basasha-batun. Dhaqan ahaan noocyada kala duwan ee basasha waa mid aad u dhadhan fiican leh, iyaga oo ku sii kordhaya sawirkaada, waxaad shaki la'aan ku heli doontaa raaxo iyo vitamiin badan. Batun basasha ma aha mid si gaar ah ugu deg dega shuruudaha dhulka, uma baahna fiiro gaar ah naftiisa isla markaana si deg deg ah u siisa miro. Iyo faa'iidada of batun basasha waa in si deg deg ah u wareejiyo kiilashadayada iyo aad u adkaysata cudurada.